कोरोना प्रभावित एक युवकको दावी : ह्वीस्की र महले यसरी ठिक भयो ! - Sidha News
कोरोना प्रभावित एक युवकको दावी : ह्वीस्की र महले यसरी ठिक भयो !
एजेन्सी । कोरोना भाइरसबाट प्रभावित एक युवकले आफुलाई ह्वीस्की र महका कारणले वुहानको अस्पतालबाट डिस्चार्ज मिलेको बताएका छन् । कोरोनाको संक्रमण लागेपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । २५ वर्षीय कोनोर रीड नामका यी युवकले अस्पतालको औषधि नखाएर आफैले ह्वीस्की र मह खाएको बताएका छन् ।
द सनको एक समाचारअनुसार यी युवकले गरेको दावीलाई चिकित्सकहरुले अहिलेसम् मभने पुष्टि गरेका छैनन् । उनले ह्वीस्की र महकै कारण आफुले कोरोना भाइरसलाई जितेको दावी गरेका छन् । बेलायतको वेल्सका उनी केही महिनादेखि चीनको वुहानमा बसोबास गरिरहेका थिए ।
यी युवक कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने पहिलो ब्रिटिश नागरिक हुन् । उनले आफुलाई कोरोना झण्डै २ महिना पहिल्यै भएको पनि बताएका छन् । अस्पताल भने उनलाई कोरोना लागेको पुष्टि गरेको छ ।
कोनोरले आफुलाई संक्रमण निकै खतरा भन्ने नलागेका कारण डर नलागेको बताएका छन् । उनले दैनिक ह्वीस्की र मह खाएका कारणले आफु छिट्टै निको भएको दावी गरे । चिकित्सकहरुले पनि उनले एन्टिबायोटिक नखाएको बताएका छन् ।
कोरोनाबाट सोमबारसम्म ३६१ जनाको मृत्यु भएको छ । हजारौँ व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । कोरोना भाइरसविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको भ्याक्सिन तयार हुन सकेको छैन ।